Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya “Tarzan”. Nwa Gareth Bale Ụmụaka Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya, Ọsọ na izi ezi. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Gareth Bale nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Ndụ mbido na nzụlite ezinụlọ
A mụrụ Gareth Frank Bale na 16th nke July 1989 na Cardiff, isi obodo Wales, United Kingdom. A mụrụ Bale nne ya Debbie Bale (onye na-arụ ọrụ ebe obibi) na nna ya Frank bale (onye na-elekọta ụlọ akwụkwọ).
Banyere mgbọrọgwụ ya, Bale bụ mba Welsh nke nwere asụsụ Bekee na nke Welsh. Ndị agbụrụ Bekee na-ekwu na nne nne ya mụrụ na England.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Nwa okorobịa Bale toro na Cardiff n'akụkụ nwanne ya nwanyị nke tọrọ ya bụ Vicky. Ọ nwere mmasị na Football site na nwata na-akwalite ọdịmma ya Ụlọ akwụkwọ High School nke Whichurch ebe a maara ya na ọ ghọwo ọkpụkpọ kachasị amasị ụlọ akwụkwọ.
Dị ka ị na-egwu bọl, Bale na-ekere òkè na hockey, rugby na ndị ọzọ na-eme egwuregwu. Otú ọ dị, ọ bụ ọrụ football ya nke dọtara uche ndị isi ego gụnyere Southhampton.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Bilie Iji Mara Aha
Mgbe ya gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na 2005, Southampton debere Bale n'ime ndị otu ya. Ọ bụ na klọb nke 16 dị afọ na-amalite ịmalite ọrụ ya ma bụrụ onye amara na ọ bụ ọkachamara n'ịgba ọkpọ.
GỤ Ben Davies Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Bale gara Tottenham Hotspur na 2007, maka ego £ 7 nde. N'oge ya na Tottenham, nchịkwa na njikwa na-eme ka ọ gbanwee ka ọ bụrụ onye na-awakpo egwu. Malite site na oge 2009-10, n'okpuru nduzi nke Harry Redknapp, Bale ghọrọ akụkụ dị mkpa nke otu, na-elebara mba anya n'oge 2010 / 11 UEFA Champions League.
Na 2013 akpọrọ ya PFA Player nke Player nke Afọ. E mechara kpọọ ya na UEFA Team of the Year. Na mgbakwunye na nke ahụ ekwuru, a kpọrọ Bale PFA Young Player of the Year na FWA Footballer of the Year 2013.
N'ihi ya, ọtụtụ ụlọ ndị isi na-achọ ya, gụnyere Real Madrid bụ nke meriri iji nweta ọrụ ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Ndụ mmekọrịta
Gareth Bale na-emeso enyi ya nwanyị ogologo oge Emma Rhys-Jones. A zụlitere Emma na Llanishen, Cardiff, dị nanị kilomita abụọ site na ụlọ ụka mbụ ahụ ebe Gareth toro.
Di na nwunye ahụ bụ ndị nwere obi ụtọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị bụ ndị malitere ịlụ dị ka ndị nọ n'afọ iri na ụma. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, Bale kwupụtara njikọ ya na Emma Rhys-Jones mgbe ọ na-eme ụbọchị ọmụmụ 27th.
Ezinaụlọ nwere ụmụ atọ ugbu a. A mụrụ nwa mbụ ha, bụ Alba Violet na Cardiff na Ọktọba 2012. Ha nwere nwa nwanyị ọzọ, Nava Valentine, na Machị nke 2016. Na 2018, di na nwunye ahụ nabatara nwa ha nke atọ bụ Axel Charles Bale, a mụrụ 8th nke May 2018.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Uwe na ihu.
Ego Gareth Bale enweghi otu ihe ahụ kemgbe ọ bịanyere aka na Ndenye 132 na Real Madrid na 2013. Ego ọzọ pụtara na ya nwere ike ịkwụ ụgwọ ego ọ bụla nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ịbanye na ịwa ahụ iji mee ka ọ daa dị ka ntị.
GỤ Joe Rodon Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Atụmatụ na-aga n'ihu iji mezuo ntutu ntutu isi maka Welsh mgbe edozi isi nwoke ya mgbe ọ na-emezighị ka ọ bụrụ isi ya.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Nicknames
Gareth Bale nwere Nicknames abụọ a ma ama. Ha gụnyere "Tarzan" na "Canon". Bale nọ na Ọktoba 2016 a na-akpọ "Tarzan" n'oge Wales 1-1 na Georgia. Mgbe egwuregwu ahụ na-aga n'ihu, Bale's man-bun gosipụtara na ihe ijuanya na-ekpughe ntutu dị ogologo nke gbadara gafere ubu ya.
A makwaara ya 'The Cannon' n'ihi ike dị ike na aka ekpe ya.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Nkwado na ego
Bale bụ otu n'ime ndị na-agba ụkwụ ole na ole nwere ọtụtụ nkwado nkwado. Ndị na-akwado ya gụnyere akwa egwuregwu - Adidas, egwuregwu vidiyo - Konami, storelọ ahịa ọzụzụ - --kwụ mkpọchi, Onye na-emepụta ụgbọ ala - Nissan na ụlọ ọrụ eletrọniki - Sony.
Ndị ọzọ gụnyere azụmahịa ya na ihe ọ Energyụ Energyụ Energy - Lucozade, Channels Subscriptions - BT Sport, Enyemaka Ọzụzụ - Masti Altitude, egwuregwu egwuregwu vidiyo EA Sports na Matress Maker Simba Sleep. Banyere itinye ego ya, Bale nwere Elevens Bar na Grill na Cardiff. Mkpebi ya iji chebe ememe ya site na i handomi ya ga-eme ka ọ nweta ihe ruru £ 10m kwa afọ.
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Ezigbo Ndụ Onye
Bale bụ ndị na-eme egwuregwu akara ngosi bụ ndị achọghị ọdịmma ọdịmma onwe onye nanị emeela ka ọtụtụ ndị nwee obi ụtọ. Ọ na-achọ ibi ndu ndụ zuru oke, ọ naghị enwekwa ihere na ilekọta ezinụlọ ya ma na-erubere obere ihe ùgwù site na iji obi ụtọ. N'ihe dị iche iche nke àgwà ya, Bale nwere ike ịchekwa nne ya.
GỤ Aaron Ramsey bụ nwata Akụkọ nke na-agbaghaghị eziokwu
Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na - Ezigbo Ndụ Ndị Ọzọ
Gareth Bale nwere ntutu isi na-acha anụnụ anụnụ. O nwere aka mgbe ụkwụ ya kwụsịrị mgbe Real Madrid meriri Sporting CP na Njikọ Njikọ, mmepe nke mere ka ọ ghara ịnọ maka ọnwa abụọ ma ọnwa atọ.
Bale dị ezigbo mma na-aga ma nwee ume dị mma. Ọ na-adị nkọ ma na-aga n'ihu na-agbachitere ndị agbachitere n'ihi ọganihu ya. A na-ele ya anya dịka otu n'ime ụzọ kachasị njọ nke fọdụrụ na ụwa, ụdị egwuregwu ya nwere mmeri sitere n'aka ndị nchịkwa, ndị egwuregwu na ndị gara aga dị ka Luís Figo.
Ngwado football Bale bụ onye na-ahụ golf. Mmasị ya maka egwuregwu ahụ ahụwo ya na-akwụ ụgwọ ego buru ibu iji nwee ụdị Sawgrass 'a ma ama par-3 17th nke arụnyere na obibi ya dị na Wales !.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Gareth Bale Akụkọ nke a na-agbakwụnyeghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bale kacha mma !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bọchị agbanweela: Machị 4, 2021
Bọchị agbanwee: Disemba 5, 2020